सूचना प्रविधिमा फड्को मार्न रणनीतिक साझेदार भित्र्याइने
प्रकाशित मिति : २०७४ कार्तिक १३ सोमबार , २,७२७ पटक हेरिएको
काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा फड्को मार्न रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने सम्बन्धमा तीव्र तयारी थालेको छ ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले सोमबार जापानी प्रतिनिधिमण्डलसँग मन्त्रालयमा भएको शिष्टाचार भेटमा नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमार्फत मुलुकको प्रगति गर्न बलियो रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने बारेमा छलफल भएको थियो ।
नेपालले विश्वको बदलिँदो नयाँ प्रविधिसँग दूरसञ्चार क्षेत्रमा काम गर्न रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने तयारीलाई तीव्र बनाएको हो । मुलुकको कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा दूरसञ्चार क्षेत्रको ठूलो योगदान भएको भन्दै सरकारले यसमा प्राथमिकताका साथ काम गर्दै आएको छ ।
नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा रणनीतिक साझेदार बन्न इच्छा देखाउँदै नेपालका लागि जापानका राजदूत मासासी ओगावा, ग्लोबल विजिनेश सेक्टर अफ केडिडीआई कोपरेसनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हिरोयुकी सोशीलगायत प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्री बस्नेतसँग छलफल गरेको छ ।
जापानी प्रतिनिधिमण्डलले आफूहरु नेपालको दूरसञ्चारसँग रणनीतिक साझेदार भई काम गर्न इच्छुक भएको बताउँदै सो सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
भेटपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सञ्चारमन्त्री बस्नेतले सन् २०२७ सम्म नेपाललाई ‘डिजिटल नेपाल’ बनाउन आवश्यक तयारीस्वरुप छिट्टै रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने बताए ।
मन्त्रालयले हाल सातै प्रदेशका १४ जिल्लामा नमुना परियोजनाका रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क कम्युटर, प्रिन्टर र इन्टरनेटको व्यवस्था गरिसकेको छ । सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षा लागू गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।
मन्त्री बस्नेतले मुलुकको भौगोलिक विकटता र प्राकृतिक विपत्तिसँग जुध्नसक्ने सूचना प्रविधिको विकासका लागि विश्वभरबाट दक्ष रणनीतिक साझेदारको खोजीमा रहेको जानकारी दिनुभयो । यसका लागि मन्त्रालयले यसअघि नै समिति गठन गरिसकेको छ ।
मन्त्री बस्नेतले सरकार दूरसञ्चार क्षेत्रमा फड्को मार्नका साथै मुलुकभित्रै नोट छपाइ, राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानी छपाइको तयारीमा रहेको जानकारी दिए ।
अनियमितता अनुदानका प्रविधि वितरणमा
सूचना प्रविधिको दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि परियोजना बन्दै
प्रविधिले खोस्यो रोजगार
वाई फाई सुस्त भएर दिक्क लाग्यो ? तीब्र बनाउन अपनाउनुहोस यी उपाय
सुदूरपश्चिम पनि प्रविधिमा लम्किदै, पहाडमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याइँदै
दिगो विकासका लागि सूचना प्रविधिको उपयोग : मन्त्री कार्की
नेपालकै त्यस्तो ठाउँ जहाँ टेलिफोन गरेरै गर्भ परीक्षण गराउन निम्ता दिर्इन्छ
धैर्य गर्नूहोस्, आउँदैछ एक वर्षसम्म चार्ज टिक्ने ल्यापटप !
चित्लाङमा प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना गरिने